एक्सप्लेनर – MySansar
इतिहासले याद गर्नेछ : देशभर कोभिड-१९ को महामारीले जनता छटपटाइरहेको बेला नेताहरुले के गरेका थिए। हामी के लेख्दैछौँ र पढ्दैछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव असफल भएको छ। प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या २७१ मा आज भएको मतदानमा २३२ जना मात्रै उपस्थित थिए। विश्वासको मत पाउनका लागि १३६… Continue reading
अहिले फेसबुकमा धेरैले फलानो ब्लड ग्रुपको प्लाज्मा चाहियो भन्दै डोनर खोजिरहेका हुन्छन्। कोभिड-१९ लागेर निको भइसकेका व्यक्तिको खोजी गर्दै गरिने यस्ता अनुरोधहरु सामाजिक सञ्जालमा, मेसेजमा र ग्रुपहरुमा पनि प्रशस्त देखिन्छन्। अहिले दैनिक ७ हजारभन्दा बढी संक्रमित पहिचान भइरहेका छन्। सक्रिय संक्रमितहरुको संख्या ठूलो छ। त्यसैले अस्पताल पुग्ने गरी कोभिडले बिरामी बनाएकाहरु पनि धेरै छन्। उपचारमा… Continue reading
सर्वोच्च अदालतले बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको एउटा फैसला अहिले चर्चामा छ। कसैले यसले अनुसन्धान अधिकारीको स्वेच्छाचारितालाई खत्तम गरेको भनेर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् भने अख्तियार कै आयुक्तको नाममा प्रकाशित प्रतिक्रियामा ‘घुस खान छुट भयो। खाएकाले पनि उन्मुक्ति पाउने भए’ समेत लेखिएको पाइयो। खासमा यो के फैसला हो? अख्तियारले के गर्दै आएको थियो? के… Continue reading